बादल अब विवाहित - अफबिट - साप्ताहिक
बादल अब विवाहित
मंसिर १८, २०७२
गायक बादल प्रसाईं वैवाहिक जीवनमा प्रवेश गरेका छन् । बादलले केही महिनाअघि नै सुषमा उप्रेतीसँग लगनगाँठो कसेको यसै साता फेसबुकबाट सार्वजनिक गरेका हुन् । बादलले आफ्नो जन्मदिनको अवसर पारेर प्रेमिका सुषमालाई जीवनसंगिनी बनाएका हुन् । ‘बादल’ को सफलतापछि गायक प्रसाईं यतिबेला दोस्रो एल्बम ‘झिल्के बादल’ सार्वजनिक गर्ने तयारीमा छन् ।
प्रकाशित :मंसिर १८, २०७२
यौनसम्पर्क गर्दा धेरै दुख्छ
यसपालि तपाईंको दसैं कस्तो होला ?
उहाँसँग निकै कठिन महसुस हुन्छ
अप्रेसन गर्दा नकारात्मक असर पर्छ कि ?
ह्याप्पी बर्थ डे बद्री असार १६, २०७६
अदालतमा छोडपत्र, घरमा सँगै चैत्र ८, २०७३
0 अफ दि इयर चैत्र १, २०७३
म पनि प्रेगनेन्ट माघ ९, २०७२
निर्देशकको निर्देशन आश्विन ३, २०७२
अब अमेरिकामै भेट्ने भाद्र १६, २०७२
तीजको तयारी : भाद्र ६, २०७२
देविकाको तीज गीत श्रावण ३२, २०७२
संगीतकर्मीको पोज असार ११, २०७२
मधुको भान्सा असार ४, २०७२